"Kulmiye Wax Badani Waxay Kaga Xidhan Yihiin, Hadba Sida Madaxwayne Muuse Biixi Uu Uga Falceliyo Guul Darrada xisbigiisa Ee doorashadan Iyo Talaabooyinka Uu Qaado"Cali Guray.
Tuesday June 08, 2021 - 01:13:09 in Wararka by Super Admin
"Isbahaysiga Labada Xisbi Ee Mucaaridka Waxa jira dad Sharaystay Ama ka Shakiyay, Balse Maaha Wax ku Cusub Somaliland"Siyaasi Cali Guray
Mucaaridka waxa kale oo caawiyay xaaladda xisbul xaakimka Kulmiye oo dad badan oo taageersanaa ay muddoba ka dayrinayeen ka hor doorashadaba. Intaasoo jirta hadana waxa run ah oo la yidhaa ciyaari waa gelin dambe. Kulmiye wax badani waxay kaga xidhan yihiin hadba sida Madaxwayne Muuse Biixi uu uga falceliyo guul darrada xisbigiisa ee doorashadan iyo talaabooyinka uu qaado si xisbigiisu uga soo kaban karo khasaaraha doorashadan xili ay 16 bilood oo keli ahi ka hadhsan tahay doorashadii Madaxtooyada.
In kasta oo weli natiijadii rasmiga ahayd ee doorashadu aanay soo bixin haddana waxa durtaba muuqda in uu bilawday olole hor leh oo lagu kala xodxodanayo xildhibaanadii iyo xubnihii golayaasha degaamada ee ku soo baxay doorashada. Waxa la isku hayaana waa yaa noqon doona Shirgudoonka Golaha cusub ee wakiilada iyo weliba Meeyarada (Gudoomiyayaasha Golayaasha Degaanka) gaar ahaan degmooyinka heerka "Grade A” oo kuwa ugu muhiimsan ee mucaaridku ku taamayo ay yihiin caasimadda Hargeysa iyo Berbera oo ah magaalo-dekedeedka keliya ee Somaliland.